Izibonelelo kunye nezibonelelo zokucoca amanzi nge-ozone
Iindlela ze-Ozonization, ngenxa yokusebenza kwazo okuphezulu kokubulala iintsholongwane kunye nentsalela esezantsi, zisetyenzisiwe kunyango lwamanzi okusela ixesha elide kwaye bekwenzile ukukhula okuphucukileyo kule minyaka ingama-30 idlulileyo. Amanzi asetyenziselwa ukusetyenziswa ngokubanzi, kokubini ukusetyenziswa ngabantu kunye nokucoca imisebenzi yemihla ngemihla, okanye t ...
Ukuphelisa iimpukane neengcongconi
Nokuba luhlobo luni kunye nendawo yezixhobo (iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutya, njl. Njl.), Ukubonakala kwazo kwinani elithile lezinambuzane ezingathandekiyo ezinokuba sisinambuzane akunakuphepheka, ngakumbi kwimeko yeempukane neengcongconi. inyani yokuba ezi zinambuzane yenye ye ...
Irhasi yeOzone inokubonelela ngeendlela ezikhuselekileyo zokubulala iintsholongwane kwezixhobo zokuzikhusela
Uphononongo olutsha lubonisa ukuba igesi ye-ozone, ikhemikhali esebenzayo kakhulu eneeatom ezintathu zeoksijini, inokubonelela ngeendlela ezikhuselekileyo zokubulala iintsholongwane kwiintlobo ezithile zezixhobo zokuzikhusela ezifuna kakhulu ukukhusela abasebenzi bezempilo kwiCovid-19. Iqhutywa ngabaphandi eGeorgi ...
Umvelisi weOzone ngokuchasene neCoronavirus
Ishedyuli yokuValwa kweeholide
Bathengi abathandekayo, ukusukela uNyaka oMtsha waseTshayina usondela, abantu beDino Puriciation bazokuchitha ixesha elinentsingiselo nosapho olusondeleyo kunye nabahlobo, silungiselela kufutshane iiholide ezizayo. Nceda ufumane ishedyuli yethu yokuvalwa kweholide apha ngezantsi: iDino Ukucoca Co., Ltd iya kuvalwa ukusukela nge-30 kaJanuwari ...
Ngaba uyafuna ukulahla ivumba elikhathazayo emotweni yakho? I-DINO Ozone Generator inokunceda. Ukucocwa kwe-DINO kutshanje kuphuhlise i-ozone generator yeemoto. Le modeli intsha isebenza nge-12 volt socket, vele uyivale emotweni, inokutshabalalisa isilwanyana, umsi wecuba, ukutya kunye nevumba legesi. Ngokubalulekileyo, inokuphinda ...
Umvelisi we-Ozone we-Aquarium
I-DINO i-ozone generator isetyenziswa ngokubanzi kwi-aquarium. Iphucula iintlanzi zangaphakathi kunye ne-tank yolondolozo lwe-tank, kwaye inikezela ngesisombululo sendalo kunye nekhuselekileyo sokuthintela ukubulala iintsholongwane. I-ozone inokutshintsha ukubonakala okunamafu okanye okungacacanga kwe-aquarium yakho edla ngokubangelwa ziintsalela zokutya kweentlanzi, inkunkuma yasemanzini, kunye ...
Ezona ndlela zikhuselekileyo zokusebenzisa i-ozone geneator
Eyona ndlela ikhuselekileyo yokusebenzisa iijenereyitha zeozone yindawo engenamntu. Qiniseka ukuba akukho bantu okanye izilwanyana endlwini kwaye ususe zonke izityalo zangaphakathi ngaphambi kokuqala umatshini weozone. Ngamanye amaxesha, oomatshini be-ozone banokusetyenziswa ngokukhuselekileyo ekhaya kwiindawo ezinomgangatho ophantsi kunye namanqanaba akhuselekileyo njengesantya ...
Iziqhamo ze-ozone kunye ne-sterilizer yemifuno iluncedo empilweni
Kubomi bethu bemihla ngemihla, ukutya okuninzi kwintengiso kulinywa kusetyenziswa isichumiso semichiza esisetyenziselwa ukugcina ukutya kungabinazinambuzane ukunyusa imveliso yezityalo. Ukuba abantu bayazitya izinto ezilinywe kusetyenziswa iikhemikhali okanye isichumiso, iyakuchaphazela impilo yabantu. Nokuba ukutya oku-organic kufuna ...
UV Ukukhanya Sterilizer, Ionizer Ozone Generator , Industrial Air nowe , Ozone Generator For Cleaning Imifuno , Ozone Ukwenza Machine ,